On 6/2/2017 (IST)
Fanaanka qurba joogta ah ee AXMED ZAKI runtii aqoon uma lahayn ka hor inta aan arkin arimaha la yiri wuxuu ku soo qoray bartiisa FACEBOOK oo isugu jiray CAAY loo geystay Muqdisho iyo kuwa shaqsiyo si aad u fool xun loo af lagaadeeyay.
Shabakada solaportal.com waxay raad raac ku sameysay fanaanka AXMED ZAKI si ay u ogaato qofka uu yahay iyo siday wax uga jiraan arimaha la yiri wuu ku kacay,ugu horeyn waxaan soo ogaanay in uu yahay fanaan dhalinyaradu aad ay ula dhaceen oo cod macaan,waxaan aad ula dhacay heesta NAASKA CAASHAQA oo qaabka loo sameeyay uu ahaa mid ka duwan kuwii hore aan ugu arki jirnay fanaaniinta cusub,waxaana marqaati fur ah daawashada YOUTUBE oo 3 MALYUUN kor u dhaaftay.
Shabakada solaportal.com ayaa waxay waqti dheer gelisay si ay u ogaato siday wax u dhaceen iyo hadii ay jirto sababta ku kaliftay fanaan Axmed Zaki in bartiisa FACEBOOK uu sumcada dhalinyarada Somaliyeed uu ku leeyahay isaga baa'biyo.
Ugu horeyn shabakada baaritaan dheer ka dib waxay soo ogaatay AXMED ZAKI in uu leeyahay laba FACEBOOK,mid waa TAAGEERYAASHIISA "FAN PAGE" kan kalena waa FACEBOOK caadi ah oo isaga shaqsiyan mar walba u isticmaalo.
Ugu horeyn sawrika iyo Linkiga hoose waa FAN PAGE oo ay xubno ka yihiin dhalinyaro aad u farabadan oo ku kala nool dalka iyo dibada.
Bogga labaad waa kan qaaska ah ee qof walba uu isticmaalo,FAN PAGE waxaa inta badan uu u furan yahay dadka CAANKA ah sida FANAANIINTA,CAYAARYAHANADA IWM.
Arintan lagu eeday AXMED ZAKI waxay bilaabatay markii qoraal aad u foolxun lagu qoray boggiisa FAN PAGE,taariikhda iyo habka qoraalka waa muhiim si fiican u eeg.
FACEBOOK waxaa lagu dhisay LUUQADA PHP oo DYNAMIC ah saa awgeed YESTERDAY ama SHALAY wuxuu ka wadaa maalin ka hor oo ah xiliga aan qoraalka diyaarinayo 2.6.2017.
Qoraalka la yiri wuxuu soo geliyay FACEBOOK isagoo EGAL INTERNATIONAL AIRPORT ka soo degaya eeg "XAMAR INAAN TAGO XABAD BAAN KAXIGAA WAA HALKII GUMAADKII 91"!
Sheekadan qofkii soo qoray way ka halowday,waayo sida uu rabay waxay ahayd in AXMED ZAKI oo reer SOMALILAND uu leeyahay MUQDISHO ayaa goboladii WAQOOYI laga soo xasuuqay,laakiin 91kii waa taariikh qalad ah iyo qoraalka oo si deg-deg ah loo qoray.
Iminka aan isla eegno qoraalka RASMIGA ah ee AXMED ZAKI uu soo qoray markii uu ka soo degay MADAARKA HARGEYSA,taariikhda waa 23.May.2017.
Waxaa laga yaabaa aqristayaasha solaportal.com in ay is weeydiiyaan siday ku dhacday isla sawirkaa in qoraal XAMAR wax looga sheegayo la soo geliyo barta FAN PAGE ee AXMED ZAKI? EASY,eeg sawirka hoose oo PHOTOSHOP aan ku bedelnay oo wixii aan doono aan ku qori karno.
Barta FACEBOOK ee taageerayaasha AXMED ZAKI waxaa la JABSADAY KHAMIISTII 29.5.2017 xili waaberigii ah,iyadoo si wadajir ah looga soo wada jebiyay labadan IP ADDRESS hoos aad ku aragtaan ee KENYA iyo HOLLAND oo gebi ahaan la wareegay AXMED ZAKI FAN PAGE.
AXMED ZAKI wax uu soo geliyo bartiisa FAN PAGE waxaa ugu dambeysay laba VIDEO oo uu soo kala geliyay 28.5.2017 23:04 PM, iyo 28.5.2017 04:44 AM oo kala ahaa AFURKII Hargeysa iyo mid HOOYADII uu la joogo.
Qoraalka ku xiga ee lagu arkay AXMED ZAKI FAN PAGE waa kan markii la JABSADAY la soo geliyay,eeg sawirka hoose 28.5.2017 ilaa 1.6.2017 wax haba yaraatee la soo geliyay ma jirto.
Waxaa kale oo xusuus mudan mar hadii AXMED ZAKI uu ka soo degay HARGEYSA 23.5.2017 isla markaana uu soo geliyay sawir uu leeyahay,FINALLY I AM IN HARGEYSA,maxaa ku qasbay in mar kale isla sawirkii uu soo geliyo isagoo laga dhigay in HATGEYSA uu yimid 1.6.2017!
Waxaa ka sii daran in dad qaarkood RUN ay moodeen in qoraalkan uu yahay mid AXMED ZAKI uu soo geliyay,iyagoo AF-LAGAADO iyo GEF barahooda FACEBOOK soo dhigay,waxaa ka mid ah shaqsi la yiri waa FANAAN oo iminka aan qoraalka diyaarinyo magaciisa ay iigu horeyso oo qoraalka hoose bartiisa FACEBOOK soo dhigay.
Waxaa ka sii daran in FAN PAGE -ga la jabsaday ee AXMED ZAKI weli dad lagu AF-LAGAADEYNAYO,taasoo 100% Axmed ZAKI aan shaqo ku lahayn.
AXMED ZAKI markii uu ogaaday in FACEBUUGIISA la jabsaday wuxuu soo duubay VIDEO uu soo geliyay FACEBUUGA u qaaska ah.
FACEBUUGA AXMED ZAKI waxaa jabsaday rag isugu jira FANAANIIN iyo kuwa kale oo sida aan aqbaaro kale ku helay aan idinla qeybsan karin,kuwaasoo loolan kula jiray isla markaana naceeyb wayn u hayey,tabcan FACEBOOK FAN PAGE waa la jabsan karaa.
Ugu dambeyn shabakada SOLAPORTAL.COM waxay 100% xaqiijineysaa in AXMED ZAKI FACEBOOK FAN PAGE laga jabsaday oo dhamaan wixii qoraal ah ee dad lagu xumeynayo aan isaga mas'uul ka ahayn.
Tabcan DADKA jabsaday waa la yaqaan.